Mbola Manohy Manao Sary Ny Famoretana Atao any An-tànanany Ihany Ilay Venezoelana Mpanao Saritatra Voatery Nandeha an-Tsesitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2016 4:01 GMT
Ito tantara avy tamin'i Carol Hills ito dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ny 4 Novambra 2016. Naverina navoaka eto io ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tonga dia nahita asa i Suprani raha vao tafavoaka avy amin'ny anjerimanontolo ary vetivety dia lasa mpanao saritatra tao amin'ny El Universal, io izay gazety an-tsoratra Venezoelana ao Caracas. Nijanona tao efa ho 20 taona teo ho eo izy.
Ampiasain’ i Cabello ilay fandaharana mba hanetsiketsehana ny Chavisme ary hiampangàna ny mpanohitra ara-politika. Niantso ny fampisehoan’ i Cabello ho endriky ny fampitahorana ny Kaomisiona iraisan'ireo Amerikàna Miaro ny Zon'Olombelona. Ary nampangain'ny Amnesty International ny fomba famborahan'i Cabello matetika ny andinindinin'ireo fandaminana ny dian'ireo Venezoelana mpisolovava mpiaro zon'olombelona, isan'ireny i Alfredo Romero. “Rehefa mandray fiaramanidina ho any ivelan'ny firenena aho, marihan'i [Cabello] hoe amin'ny firy, ho aiza aho. Ary rehefa miverina aho, teneniny hoe amin'ny firy aho no tafaverina eo amin'ny seranam-piaramanidina, ary rahoviana no mandalo eo amin'ny fadin-tseranana.”